Saturday, November 17th, 2018 - 15:36:27
Sunday September 13, 2015 - 09:07:04 in Wararka by Kubad Bile
Rafa ayaa loo magacaabay hoggaanka Tababarka kooxda Liverpool June 2004-tii waxaana uu xilligaas ka ciyaarayay Gerrard, xulkiisa oo ka qeyb gelayay Euro 2004, kaasoo ka dhacayay Portugal xagaagaas.
Xataa intii uu Rafa, beddelayay Gerard Houllier kaasoo weli jeclaa Liverpool kaasoo ahaa mid aad iigu dhowaa aniga magac iyo Saaxiibnimaba. isaga iyo Hooyadey waxaa ay usoo duuleen Portugal si ay u daawadaan anigoo xulkeyga u ciyaaraya kulankii aan ka hor jeednay Croatia wuxuuna jecleystay ciyaartii aan soo bandhigayey.
Qoraalku waa uu sii Socdaa ee Hoos kasii Aqri Taariikhda kala Raacday Rafael Benitez iyo Steven Gerrard.
Magaca Hoos ku qoran waa Magaca Buugga uu ku qoray Xasuustiisa Gerrard, waxaana uu u bixiyey, Steven Gerrard My Story, wuxuu dhammaan taleefanada ka wacay macallimiintii uu lasoo shaqeeyay marka laga reebo Rafa, kaasoo uu sheegay in uu isaga ka tegay, dhammaan xiddigihii kale ee kooxdana uu ula Baxay Naaneyso uu Jecelyahay.
STEVEN GERRARD - TAARIIKHDEYDA
'Aniga ahaan, Fekerka waxaan kala simanahay Mourinho waxaana jeclaa in uu mar leyliyo Liverpool.' Steven Gerrard ayaa is weydiiyay Sababta uusan Jose u leylin kooxdiisa in kastoo uu yiri Rafael waxaa uu ahaa Tababare Hoggaaminta si wanaagsan ii baray.
Steven Gerrard: Maalintii uu Stuart Pearce iigu sheegay anoo Suuliga ku jira in aan noqonayo Kabtanka Xulka shaqadaas oo loo heli karay Scott Parker aad ayaan u farxay.
Steven Gerrard ayaa hoggaan u ahaa Xiddigaha England, muddo kooban, wuxuu 2010 koobka Adduunka ka mid ahaa Xiddigihii Geesinimada ka muujiyey in kastoo uusan Ingiriisku Taariikh Fiican ka sameyn.
Gerard waxaa soo saaray Rafa sidaas waxaa i tiri hooyadey. Rafa waa uu salaamay, wuxuu ku yiri waan ku salaamay, waxaana uu weydiiyay su'aal in laga Jawaabo dhib badantahay oo aheyd: 'Steven ma jecelyahay Lacagta?'
Waxaa taasi ay aheyd qaar ka mid ah Ereyadii uu yiri hooyadey keddib 'Hello... good to meet you' "Waan ku Salaamay, waan ku Faraxsanahay in aan kula kulmo" Horu dhac ahaan, , kuwaas ayaa ahaa wixii ugu horreeyay ee uu Rafa yiri hooyadey. Waa Fekeray: 'Su'aashaas nuucee tahay?'
Taleefanka sare uma qaadi karin, mana aanan hadli karin, waxaanse wacay dhammaan Tababareyaasheydii kooxda Liverpool. marka laga reebo Rafa.
Aad waxaan u ceebsanayaa in aan sidaas Sameeyo maxaa yeelay Maalmihii iigu Taariikhda weynaa waxaan la qaatay isaga, sida 2005 Champions League guushii aan ku gaarnay Istanbul, welina ma jiro Tababare aan sidaas wada Sameynay.
Waxaan isku deyay in aan la hadlo anigoo adeegsanaya Af-hayeeno Spanish ah. waxaa uu si gaar ah taageere ugu ahaa ciyaartoyda South American, kuwaa ooo ay ka mid yihiin Xiddigo Wanaagsan, mana jirin Xumaan gaar ah oo isaga igala dhexeysay.
Shirarka Jaraa'id Xiddigaha kale waxaa uu ugu yeeri jiray magacyadooda hore balse aniga waxaa uu i dhihi jiray 'Gerrard' waana magaca Aabbahey. sidoo kale halka lagu lebisto marka la ciyaarayo sidaas ayuu i dhihi jiray, waxaa jiray Naaneyso uu Ciyaartoyda la jeclaa balse aniga waligey ima uusan dhihin magac aan aheyn Gerrard. qof iyo Naaneys ayey xiddiguhu u ahaayeen aniguna 'Gerrard'.
Waxaan Jeclaa Hoggaamintiisa Waana Aabahey oo kale, marka aan ka tago isu Carood yar oo dhowr mar na Dhex maray!. hadalka Gerrard oo Booggiisa soo Bandhigay ayey ugu Dambeysay.